Guddiga Hawlaha Guud - Bogga Hore
Dhibbanayaasha Dembiyada & Badbaadada Dadweynaha
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Bogga Hoyga Hawlaha Guud
Maalgelinta Hawlaha Guud
Sharci dejintu waxay abuurtay Golaha Howlaha Guud oo kaashanaysa dowladaha hoose si looga caawiyo wax ka qabashada baahiyaha kaabayaasha dhaqaalaha. Waxay u isticmaalaan barkad maalgelin u heellan inay ku bixiyaan maaliyad dulsaar yar oo ku jirta barnaamijka amaahda wareegaya. Guddi muwaadiin ah oo matalaya kaabayaasha dhaqaalaha ayaa maamula barnaamijka.
Ku dhowaad 2,000 oo mashruuc ayaa la maalgeliyey.
In ka badan $ 2.9 bilyan oo deyn ah.
Xaashida Xaqiiqda ee Mashruuca PWB
Shirka xiga ee guddiga howlaha guud ayaa daaran Jimce, Maarso 5, 2021. Kulankaan waxaa lagu qaban doonaa Zoom. Ajandayaasha kulanka, daqiiqadaha, iyo inbadan ayaa laga heli karaa bartayada Nagu saabsan .
Jadwalka Shirka Guddiga Howlaha Guud ee 2021 (PDF).
Barnaamijka PWB Broadband bandhigga Natiijooyinka Dib-u-eegista Waxqabadka Kadib Kulamada zoom Si aad ugu soo biirto, fadlan dhagsii mid ka mid ah taariikhaha hoose si aad isu diiwaangeliso.
Arbaco 1 / 27 / 2021
2: 00 - 3: 00
Khamiis 1 / 28 / 2021
2/17/21 - Guddiga Howlaha Guud wuxuu qaban doonaa kulan gaar ah 2/18/21. Xirmada ajandaha waxaa laga heli karaa annaga Nagu saabsan .
2/8/21 - Guddiga Howlaha Guud wuxuu ku faraxsan yahay inay soo bandhigaan Warsidaha Jiilaalka 2021.
1/11/21 - Wadooyinku ma noqon karaan kuwo bey’ada u roon oo aadanaha ku tiirsan? Miyay yareyn karaan raadkeena kaarboonka? Bishii Febraayo ee la soo dhaafay, xubin ka tirsan Guddiga Hawlaha Guud Dr. Jeralee Anderson ayaa ku soo bandhigtay barnaamijka TEDxTalk magaalada Everett oo ku saabsan ka faa'iideysiga waddooyinka oo ah qayb ka mid ah si wax ku ool ah isu dheellitirka nidaamka deegaanka iyo dhaqaalaha. Hadalkan hadda waa loo heli karaa Streaming.
1/5/21 - Guddoomiyaha Gobolka Jay Inslee ayaa magacaabay laba xubnood oo cusub oo ka mid noqon doona Guddiga Hawlaha Guud.
Kathryn Gardow, PE waxaa loo magacaabay inuu noqdo Gudoomiyaha cusub ee Howlaha Guud wuxuuna la wareegayaa booska # 13 oo matalaya guud ahaan bulshada. Waxay maamule ka tahay Gardow Consulting, LLC waxayna leedahay ku dhowaad 40 sano oo khibrad ah oo ku saabsan isticmaalka dhulka iyo injineernimada madaniga ah lataliye ahaan, maamule mashruuc oo ka tirsan shirkadda sharciga isticmaalka dhulka, dhismaha, iyo Injineer Magaalada ah. Waxay u shaqeysay Xubin ka tirsan Guddiga Howlaha Guud 2005 ilaa 2014 iyadoo mataleysa guud ahaan bulshada, iyadoo shan ka mid ah sanadahaas ay aheyd Kuxigeen.
Mudane Ed Stern waxaa loo magacaabay Jagada # 1 inuu yahay masuul la soo doortay oo matalaya magaalooyinka. Councilmember Stern wuxuu xubin ka ahaa Golaha Magaalada Poulsbo muddo 23 sano ah dhawaana wuxuu ka fariistay shaqadii 35 sano ee uu ka hayay warshadaha adeegyada maaliyadeed halkaas oo uu ku takhasusay maalgashiyada dakhliga go'an. Laga soo bilaabo 2008-2009, Councilmember Stern wuxuu ka shaqeynayay Kooxda Istaraatiijiyadda Internetka ee Xawaaraha Sare, boos ay magacaabeen Sharci-dejintu.
1/4/21 - Gudoomiyaha Degmada Lincoln Scott Hutsell ayaa ka degay xilkii uu hayay ee ahaa Gudoomiyaha Howlaha Guud. Commissioner Hutsell wuxuu markiisii ​​hore ku soo biiray Gudiga isagoo ah Wakiilka Gobolka ee la Doortay sanadkii 2012 waxaana u magacaabay Gudoomiye Inslee inuu noqdo Gudoomiyaha Golaha 2017. Guddiga Howlaha Guud iyo shaqaalaheeda waxay uga mahadcelinayaan Commissioner Hutsell hogaamintiisa iyo dadaalkiisa, waxayna u rajeynayaan nasiib wacan. mustaqbalkiisa ku dadaala.
1/4/21 - Barnaamijka PWB Broadband ayaa martigelinaysa laba kulan oo dadweyne ah si loo soo bandhigo natiijooyinka Dib-u-eegista Waxqabadka Kadib ee wareegga codsigooda dhismaha. Labada kulanba waxaa lagu qaban doonaa Zoom waana u furan yihiin dadweynaha. Si aad ugu soo biirto, fadlan dhagsii mid ka mid ah taariikhaha hoose si aad isu diiwaangeliso.
Arbaco 1 / 27 / 2021 laga bilaabo 2:00 - 3:00
Khamiis 1 / 28 / 2021 laga bilaabo 10:00 - 11:00
11/12/20 - Wasaaradda Caafimaadka waxay diyaarisay liistada hagida iyo ilaha nidaamka biyaha iyo macaamiisha Barnaamijyada Caawinta Macaamiisha oo ay ku jiraan shuruudaha hoos ku xusan bayaanada Guddoomiyaha ee la xiriira COVID-19.
10/23/20 - PWB waxay abaal marisaa maalgelinta dhismaha ballaaran! Liiska liiska codsiyada iyo abaalmarinta ayaa la heli karaa halkan.
9/17/20 - Liistada goobaha mashruuca dalabida dhismaha balaaran iyo xawaaraha isku xirka hada laga heli karo maalgelinta qadka shabakad
9/9/20 - OGEYSIIS GAAR AH: Xaaladda dab-bakhtiyeedka hadda ka jira Gobolka Washington iyo saameynta ay ku yeelaneyso bulshada maxalliga ah, Guddiga Howlaha Guud wuxuu doortay inuu kordhiyo waqtiga kama dambaysta ah ee codsiyada ee barnaamijka Dhismaha Broadband Grant iyo Loan. Codsiyada waxaa la soo gudbin karaa wakhti kasta illaa 11:59 pm ee Sebtember 16, 2020.
8/19/20 - PWB waxay qaban doontaa kulan gaar ah Ogosto 20, 2020. Macluumaadka kulanka iyo xirmada ajandaha waxaa laga heli karaa Nagu saabsan .
7/28/20 - Haddii aad seegtay fursad aad kaga qaybgasho websaydhada tababbaran ee PWB ay martigelisay ee Gobol-dejinta, Qiimeynta Qiimeynta, ama Maareynta Hantida, hadda waxay diyaar u yihiin qulqulka.
Qorshaynta Qiimaha (Fiidiyow)
Maaraynta hantida (Fiidiyow)
7/13/20 - Wareegga amaahda dhismaha ee wareejinta iyo bixinta deeqda PWB ayaa furan hadda illaa Sebtember 9. Booqo annaga Maalgelinta Broadband bogga wixii macluumaad dheeraad ah iyo inaad dalbato.
6/24/20 - Haddii aad seegtay fursad aad uga qaybgasho websaydhka ballaadhan ee bishaan, hadda waxay diyaar u yihiin qulqulka.
Shirka Wada-hawlgalayaasha Ballaaran ee Gobolka oo dhan (video)
Aqoon isweydaarsiga Codsiga Dhismaha Broadband (video)
6/22/20 - Si loo waafajiyo dhoorla-tuska Badhasaabka Gobolka, xafiisyada Guddida Hawlaha Guud ayaa xidhan:
Isniin, Juun 29
Jimco, Juun 10
Jimco, Juun 17
Jimco, Juun 24
Jimco, Agoosto 21
Talaado, Sebtember 8
Jimco, Oktoobar 16
6/5/20 - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington Buuggeeda Tilmaamaha Dhismaha Magaalooyinka Cagaaran: Dhiirrigelinta Hormarinta Saamaynta Yar (LID) Shuruudaha Ogolaanshaha Ka-baxsan waxay soo bandhigaysaa qaabab ay dawladaha hoose ugu dhiirrigelin karaan kuwa horumarineed inay si iskood ah ugu daraan LID mashaariicda xarumaha kobcinta magaalooyinka. Iyadoo la adeegsanayo fikradaha wareysiyada, guddiga la talinta mashruuca, iyo cilmi baarista suuqgeynta bulshada, waxaan qiimeynay caqabado la dareemay iyo dhiirigeliyayaal horumarineed si ay u bixiyaan hagitaan iyo siyaasado ka caawiya dowladaha hoose dhiirigelinta dhiirrigeliyaasha. Buug-tilmaameedka waxaa ku jira aalado iyo qalab fidin ah oo ay dawladaha hoose ka faa'iideysan karaan si loogu dhiirrigeliyo horumariyeyaasha inay ka gudbaan shuruudaha jira ee biyaha roobka oo ay ku jiraan xaashiyaha xaqiiqda ee hababka maamulka ugu fiican iyo barnaamijyo dhiirigelin kala duwan ah. Si aad u daawato ama u soo dejiso Buugga Tilmaamaha, fadlan booqo: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/growth-management/guidebooks-and-resources/
6/3/20 - Shirka Guddiga Hawlaha Guud ee Juun 5 ayaa toos looga daawan doonaa TVW.
6/1/20 - Guddiga Hawlaha Guud wuxuu martigelin doonaa laba shabakadood oo ballaadhan oo ballaadhan Juun.
Midkii kowaad wuxuu u webinar waa miiska daneeyayaasha Juun 17 laga bilaabo 1:30 ilaa 3:00. Webinar-kan ayaa diiradda saaraya horumarinta siyaasadda iyo hirgelinta. Waxaa loogu talagalay inay noqoto dood furan oo ku saabsan shaqada la dhammaystiray, halka barnaamijku u socdo, iyo dadaallada daneeyayaasha hadda jira iyo mashaariicda.
Shirka labaad ee lagu webinar waa bisha Juun 18 laga bilaabo 1:30 ilaa 3:00 waana a aqoon isweydaarsi ballaadhan iyo aqoon isweydaarsi amaah ah loogu talagalay dadka daneynaya inay codsadaan maalgelinta ballaadhinta Guddiga Hawlaha Guud. Guddigu wuxuu rajaynayaa inuu furmo wareeggan maalgalinta bisha Luulyo 13, 2020. Ka-qaybgalayaasha aqoon-isweydaarsiga waxay heli doonaan hagitaan cad oo ku saabsan dhammaystirka codsi guuleysta, oo ay ku jiraan howlaha horudhaca u ah sharciga ee ay tahay in la dhammaystiro ka hor inta aan la codsan.
5/15/20 - PWB waxay ku faantaa inay soo bandhigto Wargeyska Spring 2020. Waxaa ka mid ah cusbooneysiin loogu talagalay barnaamijka dhismaha balaaran ee PWB, iyo xusuusin ah in barnaamijka RCW ee xukumaya uu u baahan yahay codsadayaasha inay la xiriiraan bixiyeyaasha adeegga internetka ee maxalliga ah (ISPs) ee u dhow aagga mashruuca la soo jeediyey. Xidhiidhkani waa inuu codsadaa qorshaha ISP si kor loogu qaado adeegga ballaadhinta ee aagga mashruuca xawaareyn buuxisa ama dhaafsiisa qeexitaanka gobolka ee adeegga ballaadhinta muddada mashruuca la soo jeediyey. Xiriirkan waa in la sameeyaa ugu yaraan lix toddobaad kahor gudbinta dalabka maalgelinta ee PWB, iyo dukumiintiyada isdhexgalkaan waa in lagu soo gudbiyaa arjiga.
5/14/20 - Waaxda Caafimaadka (oo meteleysa iskaashi hay'ado badan leh oo la leh Ganacsiga, Ecology, Guddiga Howlaha Guud, iyo Guddiga Adeegyada iyo Gaadiidka) ayaa soo saaray sahan saameyn dhaqaale ah oo loogu talagalay nidaamyada biyaha iyo biyaha wasakhda dadweynaha. Sahanku wuxuu raadinayaa inuu fahmo sida ay u saameeyeen nadiifiyayaashan danabka guud iyo dakhligooda inta lagu gudajiray aafada. Fadlan qaado daqiiqado yar si aad udhameystirto sahaminta ugu dambayn May 26. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan emayl u dir DWSRF@doh.wa.gov.
5/1/20 - Shirka Gudiga Hawlaha Guud ee maanta ayaa toos looga daawan doonaa TVW.
4-7-20 - Guddiga Howlaha Guud wuxuu kordhiyay waqtiga kama dambaysta ah ee lagu codsanayo deeqaha Broadband suurtagalka ah iyo fidinta ilaa 1-da Juun, 2020. "Waxaan dooneynaa codsadayaasha inay diiradda saaraan ilaalinta naftooda iyo bulshadooda nabadgelyada, iyada oo aan laga walwalin waqtiyada kama-dambaysta ah ee la la'yahay," ayuu yiri Agaasimaha Barnaamijka Broadband Westall.
3-25-20 - Waaxda Caafimaadka waxay u diyaarisay ilo loogu talagalay howlaha biyaha bulshada shaqaalaha, kormeerka, iyo xaddidaadda adeegga xaddidan. Waxaa laga heli karaa waaxda Cabitaanka bogga ugu weyn Biyaha iyada oo cinwaankeedu yahay "Tilmaamaha COVID-19 ee Mulkiilayaasha iyo Hawlwadeennada Nidaamka Biyaha ee Cabaya". Wasaaradda Caafimaadka waxay sidoo kale bixisaa liis dhameystiran oo ah ilaha gargaarka degdegga ah nidaamyada biyaha.
3 / 13 / 20 - Maaddaama fayraska COVID-19 uu wali ka sii soconayo Washington oo dhan, Guddiga Hawlaha Guud iyo kooxdu waxay sii wadi doonaan inay u adeegaan bulshooyinka maxalliga ah. Waxaan dooneynaa inaan wadaagno qaar ka mid ah talaabooyinka aan qaadeyno si aan kula socodsiino oo aad u badbaado inta uu cudurkan dillaacay
Maamulka qandaraaska iyo maareynta - Shaqaalaha ayaa la heli karaa inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah si ay uga jawaabaan su'aalahaaga iyo habka lacag-celinta.
Xukunka Broadband - Si loo yareeyo halista soo-gaadhista bulshada iyo shaqaalaha, dhagaysiga dadweynaha ee xukun ballaadhinta wuxuu ku socon doonaa khadka tooska ah. Soo gudbinta faallooyinka qoraalka ayaa si weyn loogu talinayaa. Faallooyinkaas waxaa lagu soo diri karaa emayl ahaan Connie.Rivera@commerce.wa.gov ama fakis ahaan loogu diray 360-586-8440 illaa Maarso 27, 2020. Skype kaqeybgalka waxaa la heli karaa Maarso 31, 2020 laga bilaabo 1:00 pm ilaa 2:00 pm. Lambarka taleefanka waa 360-407-3813 iyo kaarka aqoonsiga shirku waa 1345139.
Kulamada Gudiga - Laga bilaabo kulankeena Abriil 3, 2020, PWB waxay ku qaban doontaa shirarkeeda billaha Gudiga Skype. Ajendayaasha waxaa lagu dhajin doonaa degelkeenna waxaana loogu qaybin doonaa si elektaroonig ah.
SYNC - Shirka Abriil 2, 2020 wuxuu ka dhici doonaa meel fog iyadoo loo marayo Skype.
Kooxaha Tech-ka - Codsiyada Kooxda Tech ayaa loo aqbalaa si joogto ah. Kulamada Kooxda Tech Tech loo qorsheeyay dib ayaa loo qorsheyn doonaa ama meel fog laga dhici doonaa, iyadoo la adeegsanayo Skype ama qaabab kale.
Tababbarka gobollada - Dhammaan afarta munaasabadood ee tababarka gobolka ee la qorsheeyay laga bilaabo Maarso illaa Juun 2020 waa la joojiyay. Waxaan rajeyneynaa inaan la falgalno bulshada oo aan kala hadalno mashaariicda iyo barnaamijyada kulanka soo socda ee Golaha Isuduwidda Kaalmada Kaabayaasha.
Waxaan soo dhawaynaynaa su'aalahaaga iyo faallooyinkaaga ku saabsan PWB waxaanan rajaynaynaa inaan si shakhsi ah ula kulmo markay duruufuhu saamaxaan. Fadlan raac websaydhka Waaxda Caafimaadka ee gobolka si aad u hesho macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan fayraska COVID-19.
3/11/20 - Iyadoo welwel laga qabo baahsanaanta COVID-19 oo ka socota federaalka, gobolka, iyo ururada caafimaadka maxalliga ah, Guddiga Hawlaha Guud wuxuu ka qoomameynayaa inuu ku dhawaaqo joojinta munaasabadaha Tababbarka Gobolkeena ee sanadkan. Tani ma aha tallaabo aan si fudud u qaadanayno, laakiin waxay la jaanqaadaysaa tallaabooyinka ururada kale. Waxaan ka raali galineynaa dhibkaas, qof walbana waxaan uga mahadcelineynaa fahamkiisa.
Diiwaanka Wararkii Ugu Dambeeyay
Burbur ayaa ka dhashay Basich Boulevard, oo ah marin looga daad gureeyo tsunami Aberdeen, qunyar socodka qunyar socodka ah. Amaah Degdeg ah PWB ayaa maalgelinaysa dayactirka.
PWB waxay maalgelisay dhismaha Saldhigga Cimilada Qoyan ee Georgetown ee Seattle.
Senator Honeyford wuxuu booqday goobta Terrace Heights Sewer District ee mashruuca amaahda Degdegga ah ee PWB. Bidix ilaa midig: Gray & Osborne Engineer Nancy Wetch, Commissioner Frank Sliger, Commissioner Robert Linker, Senator Honeyford, and Commissioner Harold Sliger.
Guddoomiyaha Gobolka Inslee wuxuu u saxiixayaa 2SSB 5511 sharci, dejinta barnaamij ballaadhan oo cusub oo ka dhex jira PWB.